Guddiga Doorashooyinka Puntland oo 15 Cisho ku Daray wakhtigii ay u Asteeyeen Dorashooyinka Deeganka. | Sahan radio
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo 15 Cisho ku Daray wakhtigii ay u Asteeyeen Dorashooyinka Deeganka.
Guddiga doorashooyinka Kmg ah ee Puntland ayaa maanta sheegay in 15 maalmood dib loo dhigay xilligii horey loogu qorsheeyey doorashada golayaasha deegaanka Puntland,waxaana la qorsheeyey inay dhacdo 15,July,2013.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre oo Saxaafadda galabta kula hadlay xarunta PDRC ee Garoowe ayaa sheegay in 15-ka July,2013 laga dhigay xilliga doorashada golaha degaanku qabsoomayso,halka hore loo cayimay 30,June ee sanadkan.
Barre ayaa dibu dhacan ku sababeeyey codsi horey uga yimid ururada siyaasada Puntland oo ku aadanaa in 15 maalmood loogu daro muddada lagu soo xareynayo liisaska musharaxiinta golayaasha deegaanka.
”Markaan ururada isla aragnay xilliga doorashada ,markaanu tixgelinay codsi nooga yimid ururada oo ku saabsan geedi socodka dimoqraadiyada Puntland iyo duruufaha jira ayaa waxa laga maarmi waayay in wakhti lagu daro xilliga doorashooyinka deegaanka”ayuu yiri gudoomiyaha doorashooyinka Puntland.
Ururada siyaasadda Puntland ayaa ku mashquulsan diyaarinta murashaxiinta u tartami doona doorashada golayaasha deegaanka,waxaana dhinac socda safaro ay masuuliyiin ka tirsan Ururadu ku marayaan degmooyinka iyo gobollada Puntland.